$ 15.39 bhiriyoni: Musika wekubhadhara mota weChina uri kuwedzera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » $ 15.39 bhiriyoni: Musika wekubhadhara mota weChina uri kuwedzera
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • China Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Musika uyu unobvuma kusimudzira kwekukurumidza mushure mekugadziriswa kwemabhizimusi emota pamusoro pemakore mashanu kana matanhatu apfuura.
Yekumhanyisa-kumhanyisa kukura kwakafanotaurwa kumusika weChina wekubhadhara mota.
Musika weChina wekurendesa mota kumusoro $ 15.39 bhiriyoni muna 2020.
Musika weChina wekubhadhara mota uri kuwedzera zvakatsiga.
Zvinoenderana neazvino indasitiri mushumo, musika weChina wekurendesa mota wave kuda kupinda munguva yekumhanyisa-yepamusoro uye yepamusoro 100 bhiriyoni yuan (US $ 15.39 bhiriyoni) muna 2022.
Muna 2021, iyo indasitiri yakaona mamwe makambani ekurenda mota aine kukwikwidzana kwakakwirira kusanganisira China Auto Rental uye eHi inotora chikamu chikuru chemusika.
Kune mamirioni 418 maChinese vanhu vane rezinesi rekutyaira muna 2020, asi iyo yakazvimiririra mota muridzi ndeye 244 mamirioni chete mugore rimwe chete. Sezvo huwandu hwevatyairi vepamutemo vasina mota yakazvimiririra yakawedzera zvakanyanya, hombe nzvimbo yevatengi yemusika wekurenda mota yakabuda, akadaro mushumo.
Nekuda kwemitemo yakanaka uye kukura kwekushandisa, nyika inoda kubhadharisa mota iri kuwedzera zvakatsiga, akadaro mushumo.